ukufunyanwa komatshini wokugaya irayisi osebenza
Xa umatshini wokugaya irayisi uqalisa ukusebenza, Yintoni ekufuneka yenziwe ngabaphathi?
1. Faka i-mill yeerayisi kwindawo egudileyo ngaphambi kokuqala kwaye ujonge ukuba ngaba onke amalungu ahambelana noko aqhelekile, Unxibelelwano luyakhulula kwaye nebhanti yokuhambisa ikwimeko elungileyo. Nika ingqalelo imeko ye-lubrication yazo zonke iinxalenye. Kuphela kusemva kokuqinisekisa ukuba la malungu angasentla aqhelekile apho unokwenza umatshini wokugaya irayisi uqalise ukusebenza.
2. Susa inkunkuma kwilayisi emdaka, ezinje ngamatye kunye nelitye. Akufuneki kubekho amatye amakhulu kunye nesinyithi , ukuze kungonakaliswa umatshini wokugaya irayisi. Jonga ukuba umswakama weerayisi uhlangabezana neemfuno na okanye hayi.
Ukuba wonke umsebenzi wokulungiselela apha ngasentla wenziwe kakuhle, ngoku ungaqala irayisi yokugaya irayisi.
Emva kokusebenza, Kukho izinto ezibalulekileyo ezifuna ingqalelo yakho. Xa wehlisa izixhobo zokwenza irayisi, kuya kufuneka uqaphele ezi zinto zilandelayo ukuthintela ukonakala komatshini.
1. Chaza umatshini wokugaya irayisi ngendlela efanelekileyo. Ngokubanzi isuka kwizixhobo ukuya kwizinto eziphambili kwaye ingaphandle ngaphakathi.
2. Yahlula iinxalenye zomatshini ngokwepropathi kunye nenqanaba lokuchaneka kwezinto.
3. Ukunciphisa ixesha lokuhliswa.
4. Coca udaka okanye igrisi ngaphambi kokuthoba kwaye ugcine ucocekile ngexesha lenkqubo.
5. Lungiselela kakuhle ukufakelwa emva kokubuswa, ngokwenyusa ukusebenza kofakelo kunye nokuchaneka. Phawula iindawo zoomatshini ngexesha lokwehliswa.
6. Sebenzisa izixhobo ezifanelekileyo ukwehlisa isityalo sokugaya irayisi ngaphandle kokonkqonkqoza kokhuseleko ukuthintela ukonakaliswa okanye ukwenziwa kweenxalenye zomatshini .
Ilayisi kukutya kwethu okuyisiseko kubomi bethu bemihla ngemihla. Imbali yerayisi iphantse yalingana nathi njengabantu emhlabeni. Ke namhlanje imakethi yerayisi ibisanda kakhulu. Ungayifumana njani irayisi kwi-paddy? Ewe iRice Mill iyabaluleka. Nangona kunjalo, Nokuba ungumthengi okanye umthengisi, Kuyimfuneko kuwe ukuba wazi ulwazi olusisiseko lomatshini weerayisi njengeenxalenye zomatshini wokugaya irayisi kunye nendlela onokuthi ukhethe kwaye usebenzise ngayo umatshini wokugaya irayisi ngokufanelekileyo.
Iindawo zokugcina umatshini wokugaya irayisi zibandakanya isikrini selayisi, blade huller, kunye nesilinda esimhlophe. Ngenxa yokuxabana okuhlala kwenzeka phakathi kwala malungu neenkozo, iindawo ezininzi ezisecaleni zinxitywa ngokulula ukuya kwinqanaba elithile. Ngokunxiba kakhulu, isivuno kunye nomgangatho yerayisi emhlophe ngokuqinisekileyo ziya kuncipha. Ngeli xesha, kuya kufuneka uzitshintshe iindawo ezingasasebenziyo. Nceda ujonge kwiNcwadi yoMsebenzisi ngolwazi malunga nokudibanisa kunye nokufaka izinto ezisecaleni.
Yokwakha indawo yokuhluza irayisi ephakathi okanye enkulu, eziphakathi okanye ezinkulu iimayile zerayisi ziyafuneka. Banokuqhubekeka 10-100 iitoni zerayisi ngosuku. Ukuba isityalo sokulungisa sincinci, emva koko, Iiglasi zerayisi ezincinci okanye izixhobo zokudibanisa iilayini ziya kufaneleka . Banokuqhubekeka bejikeleza iitoni ezininzi. Ukuba yeyosapho okanye abathengisi basesitalatweni abasusayo, ke umlinganiso omncinci okanye oomatshini bokugaya irayisi yeyona ndlela ilungileyo.
Nxibelelana nathi Ukuze wazi ngomatshini wokugaya irayisi osebenza